Kooxda Arsenal oo hoos u dhigtay qiimaha lagu iibsan karo Kabtankeeda Pierre-Emerick Aubameyang – Gool FM
Haaruun April 7, 2020
(London) 07 April 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinaya inay hoos u dhigtay qiimaha lagu heli karo Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana ay xustay inuu ku kacayo 31 milyan oo gini, iyadoo la isla dhex marayo in mustaqbalka weeraryahankan uusan sal fadhiya lahayn.
Aubameyang ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo garoonka Emirates dhowaan, waxaana uu arki doonaa heshiiskiisa haatan ee kooxda Macallin Mikel Arteta oo dhacaya xagaaga soo socda.
Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa labadaba lagu qiimeeyay inay xiiseynayaan xiddiga xulka qaranka Gabon, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport, Arsenal ayaa haatan hoos u dhigtay qiimaha ay ku rabaan in looga iibsado kabtankooda.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Gunners ay markii hore ku rabtay dalab 50 milyan oo euro ah oo u dhiganta 44 milyan oo gini oo loogu talagalay inuu ku tago Aubameyang, laakiin ay haatan aqbali doonaan dalab 35 milyan euro ah oo u dhigma 31 milyan oo gini.
Haddii Arsenal ay go’aansato inaysan iska iibin Aubameyang suuqa kala iibsiga xagaagan, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Gabon ayaa si xor ah ku bixi kara sanadka 2021-ka haddii uusan qalinka ku duugin heshiis cusub.
30-sano jirkaan ayaa loo diiwaan geliyey 17 gool oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan, waxaana uu guud ahaan dhaliyay 61 gool 97 kulan oo uu u saftay kooxda Arsenal tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Borussia Dortmund bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii.